Relationship Archives - Myanmar Red News
အရမ်းချစ်ပီးမှလက်ထပ်ခဲ့တဲ့စုံတွဲ အိမ်ထောင်သက် ၇၅ နှစ်မှာ ဖက်ပီးတော့ အိပ်စက်ရင်း ဆုံးပါးသွားခဲ့ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှာ ရှိကြတဲ့တစ်ချို့သော စုံတွဲတွေ ၊လင်မယားတွေဟာ အိမ်ထောင်သက် ၇နှစ် လောက်ပေါင်းနေနိုင်ဖို့က အလွန့်ကို ခဲရင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ အခုဖော်ပြပေးမဲ့ လင်မယားနှစ်ဦးကတော့ အိမ်ထောင်သက် ၇၅ နှစ် anniversary မှာ တစ်ယောက် လက်မောင်းပေါ်တစ်ယောက်အိပ်စက်ရင်း သေဆုံးသွားကြတဲ့ဖြစ်ရပ်လေးပါ။ Jeanette နဲ့ Alexander Loczko အမည်ရှိ လင်မယားနှစ်ဦးက လွန်ခဲ့တဲ့ ၈နှစ်ကတည်းက အတူတူနာမကျန်းဖြစ်နေကြတာပါ။ အဘိုးအိုက သူ့ရဲ့ ခေါက်ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာ သူမနဲ့ထိမ်းမြှားလက်ထပ်ချိန်တုန်းကရိုက်ထားတဲ့ လက်ထပ်ဓာတ်ပုံလေးကို အမြဲသိမ်းထားပါတယ်။ သူတို့တွေက ၁၉၄၀ ခုနှစ်၊ဇွန်လ ၊၂၉ ရက်နေ့မှာ ထိမ်းမြှားလက်ထပ်ခဲ့ကြပြီး တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ဝေးကွာခြင်းမရှိဘဲ အမြဲတတွဲတွဲနဲ့ သွားလာနေထိုင်ခဲ့ကြတာပါ။ ‌နောက်ပြီး သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာ တစ်ယောက်လက်တစ်ယောက်ကိုင်ပြီး သေဆုံးသွားချင်တယ်လို့ […]
သည်းသည်းလှုပ် ချစ်မပြတတ်ပေမယ့် သင့်ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ ချစ်သူတွေမှာ ဒီလိုမျိုးအချက်တွေရှိတယ် ကံကောင်းတဲ့ မိန်းကလေးဆိုတာ ချစ်သူ၊ လက်တွဲဖော်၊ အိမ်ထောင်ဖက်ရဲ့ ချစ်ခြင်းနဲ့အတူ တန်ဖိုးထားခြင်းကို ခံရတဲ့သူပါပဲ။ တစ်ချို့ယောက်ျားလေးတွေက သည်းသည်းလှုပ်တော့ ချစ်မပြတတ်ပေမယ့် တကယ်တန်ဖိုးထားတယ်ဆိုတာ သူတို့ရဲ့အပြုအမူကနေတစ်ဆင့် သိလို့ရပါတယ်။ သင့်ချစ်သူဟာ ဒီအချက်လေးတွေနဲ့ ကိုက်ညီနေတယ်ဆိုရင်တော့ သင်အရမ်းကံကောင်းပါတယ်။ (၁) သင့်အကြိုက်လိုက်တယ် ယောက်ျားလေး တော်တော်များများက သူတို့ပဲဆုံးဖြတ်၊ သူတို့ပဲဆုံးဖြတ်ချင်တာပါ။ ဒါပေမယ့် သင့်ချစ်သူကတော့ သင့်ကိုအလိုလိုက်တယ်၊ သင့်ဆန္ဒတွေကို လိုက်လျောပေးတယ်၊ သင့်အလိုကျ လိုက်လုပ်ပေးတယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ကိုအရမ်းတန်ဖိုးထားလို့ပါ။ သင်ပျော်ရွှင်ဖို့က သူ့အတွက် အရေးကြီးဆုံးဖြစ်သလို၊ သင်ပျော်နေရင် သူလည်းပျော်တာကြောင့် သင့်အကြိုက်တွေကို အမြဲလိုက်ပေးနေမယ့်သူပါ။ (၂) ဖြည့်ဆည်းပေးတယ် သင့်ချစ်သူဟာ သူများတွေလို ကဗျာဆန်ချင်မှဆန်မယ် ဒါပေမယ့် သင့်အတွက် အမြဲတမ်းစဉ်းစားပေးတတ်တဲ့သူပါ။ သင်ကြိုက်တတ်တဲ့ မုန့်လေးတွေဝယ်လာပေးတာမျိုး၊ သင်လိုအပ်နေတဲ့ […]
SINGLE များအတွက် ကိုးရီးယား ဒီဇိုင်နာတစ်ဦး ဖန်တီးထားတဲ့ ကော်ဖီဗူး
SINGLE များအတွက် ကိုးရီးယား ဒီဇိုင်နာတစ်ဦး ဖန်တီးထားတဲ့ ကော်ဖီဗူး ကော်ဖီနဲ့လက်ဖက်ရည်ကို ကြိုက်တဲ့ သူတွေ အတွက်တော့ နေ့စဉ်ပုံမှန်သောက်သုံးခြင်းကတော့ အထူးအဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်။ ဒါပေမဲ့လည်း သင်ဟာ တစ်ကိုယ်တည်းသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့နေ့စဉ်ကော်ဖီသောက်ရင်းနဲ့ အနမ်းတွေရရှိစေနိုင်မယ်ဆိုရင် အနည်းငယ်ထူးဆန်းသွားမှာပါနော်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှ ဒီဇိုင်နာတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဂျန်ဝူဆွတ်ခ် ရဲ့ဖန်တီးမှုဟာ တစ်မူထူးခြားနေတာပါနော်။ သူကတော့ တစ်ခါသုံး ကော်ဖီခွက်အဖုံးတစ်မျိုးကို ဆန်းသစ်လှတဲ့စိတ်ကူးနဲ့ တီထွင်ဖန်တီးခဲ့တာပါနော်။ ဂျန်ဝူဆွတ်ဖန်တီးလိုက်သော ကော်ဖီခွက်အဖုံးလေးဟာ လူတစ်ယောက်ရဲ့နှာခေါင်းနဲ့ နှုတ်ခမ်းပုံစံ ပြုလုပ်ထားတာပါနော်။ဂျန်ဝူဆွတ်ခ် ရဲ့အစောပိုင်းဖန်တီးမှုဟာ နှုတ်ခမ်းပုံရဲ့အောက်ဖက်နှုတ်ခမ်းသားမှာ အပေါက်ဖောက်ပေးထားပြီးတော့ ကော်ဖီသောက်သူဟာ ပုံမှာတွေ့မြင်ရသလို နှုတ်ခမ်းကိုနမ်းပြီးတော့ သောက်ရသလိုပုံစံပါနော်။ နောက်ပိုင်းမှာလဲ အနမ်းစစ်ရဲ့ခံစားချက်ရစေဖို့အတွက် နှာခေါင်းနဲ့မျက်နှာအစိတ်အပိုင်းကိုပါ ထည့်သွင်းခဲ့တာပါနော်။ဂျန်ဝူဆွတ်ရဲ့ပြောဆိုမှုမှာတော့သူကိုယ်တိုင်လည်း ကော်ဖီနေ့တိုင်းသောက်ပြီး ကော်ဖီနဲ့အနမ်းတွေကိုနှစ်သက်ပေမဲ့ အနမ်းတော့မရရှိနိုင်တဲ့အတွက် ဒီစိတ်ကူးကိုရခဲ့တာ လို့ ဆိုပါတယ်နော်။ သူရဲ့ဆန်းသစ်တဲ့တီထွင်မှုကတော့ လူမှုကွန်ယက်အသုံးပြုသူတွေကြားမှာ ပျံ့နှံ့သွားခဲ့ပြီးတော့အချို့သောတစ်ကိုယ်တည်းသမားတွေက နှစ်ခြိုက်မှုရှိခဲ့ပေမဲ့လည်း အချို့ကတော့ရူးကြောင်ကြောင်စိတ်ကူးတစ်ခုလို့သာ မှတ်ချက်ပေးခဲ့ကြပါတာ ဖြစ်ပါတယ်။ […]
ဓာတ်ပုံရိုက်ဝါသနာပါတဲ့ ကောင်မလေးတွေကို ချစ်သူထားမိရင် ခံစားရတဲ့ ဒုက္ခများ
ဓာတ်ပုံရိုက်ဝါသနာပါတဲ့ ကောင်မလေးတွေကို ချစ်သူထားမိရင် ခံစားရတဲ့ ဒုက္ခများ ​ကောင်​လေးများ၏ instagram အကောင့်တွင် ချစ်သူ ကောင်မလေး၏ ပြီးပြည့်စုံသော ဓါတ်ပုံကို ရိုက်ကူးရန် ကြိုးပမ်းနေသော ရည်းစားကောင်လေးများ၏ ရယ်စရာဓါတ်ပုံများ တင်ထားသည်ကို အောက်တွင် ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ ၁။ ၂။ ၃။ ၄။ ၅။ ၆။ ၇။ ၈။ ၉။ ၁၀။ ၁၁။ ၁၂။
မိန်းကလေးတိုင်း ချစ်သူကောင်လေးဆီက တိတ်တခိုးမျှော်လင့်မိတတ်ကြတဲ့ အရာ(၄)ခု
မိန်းကလေးတိုင်း ချစ်သူကောင်လေးဆီက တိတ်တခိုးမျှော်လင့်မိတတ်ကြတဲ့ အရာ(၄)ခု မိန်းကလေးတိုင်းလိုလိုက သူတို့ချစ်သူဆီကနေ လိုချင်တဲ့အရာတွေကို ဖွင့်ဟပြောဆိုလေ့မရှိတတ်ကြပဲ အလိုက်တသိပေးတတ်တာမျိုးလေးကို ပိုလိုချင်မိတတ်ကြပါတယ်။ဒီလိုပဲ ချစ်သူကောင်လေးတွေဆီကနေ ကောင်မလေးတွေ တိတ်တိတ်လေး မျှော်လင့်မိတတ်ကြတဲ့ အရာလေးတွေ ရှိလို့နေပါတယ်နော်။ဒီအချက်တွေက relationship တစ်ခုမှာ ကောင်မလေးတွေ လိုချင်တတ်ကြတဲ့ အရာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အချစ်ကို ခံစားမိချင်တာ ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့မိန်းကလေးတိုင်းက အချစ်ဆိုတဲ့အရာကို ခံစားချင်တတ်ကြသူတွေပါ။ လူတိုင်းကတော့ အချစ်ဆိုတဲ့အရာကို တစ်ကြိမ်တစ်ခါတော့ ခံစားဖူးကြမှာပါ။မိန်းကလေးတွေအတွက် ချစ်မိသွားတဲ့အခါမှာတော့ အရာရာတိုင်းက ပိုလွယ်ကူလာတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို တကယ်ချစ်မိရင်တော့ သူတို့သိအောင် ပြတတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မိန်းကလေးတွေက ကိုယ့်ချစ်သူကောင်လေးဆီက သူတို့ကို ချစ်ကြောင်းဖော်ပြတတ်မှုလေးကို အလိုက်တသိပေးတာမျိုး လိုချင်တတ်ကြတာပါ။ အသိအမှတ်ပြုမှု မိန်းကလေးတွေ နောက်ထပ် မျှော်လင့်မိတဲ့အချက်က ကိုယ့်ချစ်တဲ့သူဆီက အသိအမှတ်ပြုမှုလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။မိန်းကလေးတွေဟာ ဒီလို အသိအမှတ်ပြုတတ်မှု သေးသေးလေးတွေကအစ ချစ်သူကောင်လေးဆီက […]
ပုရိသတွေရင်ကို စကားတစ်လုံးမှ ပြောစရာမလိုပဲ လှုပ်ခါစေမယ့်အပြုအမူများ
ပုရိသတွေရင်ကို စကားတစ်လုံးမှ ပြောစရာမလိုပဲ လှုပ်ခါစေမယ့်အပြုအမူများ အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့အချက်တွေကတော့ စကားတစ်လုံးမှ ပြောစရာမလိုတဲ့ အပြုအမူလေးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအပြုအမူလေးတွေကိုသာ ဂရုတစိုက်ပြုမူရင် ပုရိသအပေါင်းရဲ့ စိတ်ကို မယိုးမရွဖြစ်စေပြီး အတိုးချချစ်စေနိုင်မယ့် အပြုအမူတွေဖြစ်ကြောင်း အာမခံပါတယ်။ (၁) နှစ်နှစ်ကာကာ ပြုံးပြပါ ပုံးစရာရှိတဲ့အခါ ပြုံးလိုက်ပါ။ သိပ်ပြီး ရှက်ကြောက်မနေပါနဲ့။ ဘယ်သူ့ကိုမှ သတိမထားမိတဲ့ ပုံစံနဲ့ နှစ်နှစ်ကာကာ ပြုံးပါ။ သင့်ကို သတိထားနေတဲ့ အမျိုးသားဆိုရင် ဒီအချိန် ရင်တွေ တစ်လှပ်လှပ်ဖြစ်နေလောက်ပါပြီ။ (၂) ဝတ်စားဆင်ယင်မှုအပိုင်း ဝတ်စားဆင်ယင်မှုအပိုင်းမှာလည်း ကိုယ်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်သွင်ပြင်နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ အဝတ်အစားကို ဝတ်ဆင်တတ်ပါစေ။ အရမ်းခေတ်အဆန်ကြီးလည်း မဟုတ်သလို အရမ်းကြီးလည်း ခေတ်မတုံးပါစေနဲ့။ ဒါပေမယ့် အခုခေတ် ကောင်လေးတွေ အများစုကြိုက်တဲ့ပုံစံက ရိုးရိုးယဉ်ယဉ်လေးနဲ့ ချပ်ချပ်ရပ်ရပ် ဝတ်စားဆင်ယင်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေပေါ့။ (၃) […]
ကိုယ်အရမ်းချစ်ရတဲ့ ကိုယ့်ချစ်သူအပေါ် လုံးဝ မလုပ်သင့်တဲ့ အချက်များ
ကိုယ်အရမ်းချစ်ရတဲ့ ကိုယ့်ချစ်သူအပေါ် လုံးဝ မလုပ်သင့်တဲ့ အချက်များ တကယ်ချစ်ကြတဲ့ ချစ်သူစုံတွဲတွေကြားမှာ မမျှော်လင့်ဘဲ လမ်းခွဲဖို့ထိ ဖြစ်သွားစေတဲ့ အမှားတွေ လုပ်မိတတ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီအမှားတွေကို မလုပ်မိအောင် သတိထားသင့်ပါတယ်နော်။ ၁။ စိတ်ကောက်လွန်ခြင်း စိတ်ကောက်တာဟာ ချစ်သူဘဝရဲ့ပျော်ရွှင်စရာ Game လေးပါ။ဒါပေမယ့် Game Over မဖြစ်သွားဖို့တော့ လိုတယ်။ချော့တက်တယ့်သူတွေအတွက် ပြဿနာ မရှိပေမယ့် မချော့တက်တဲ့ သူတွေအတွက် အဆိုးဆုံး ပြဿနာပါ။စိတ်ကောက်ပါ။ဒါပေမယ့် ချော့ရင်စိတ်ပြေပေးပါ။ တန်ဆေးလွန်ဘေးတဲ့။မိုးရွာလို့ ပန်းတွေလန်းဆန်း ပေမယ့် မိုးများရင် ပန်းခင်းပျက်သွားတက်တယ်။ ၂။ သဝန်တိုလွန်းအားခြင်း မိန်းကလေးဖြစ်စေ / ယောက်ျားလေးဖြစ်စေ သဝန် တိုတက်ကြပါတယ်။သဝန်တိုတာ ဟာ အချစ်တဲ့။ မှန်သင့်သလောက်မှန်ပေမယ့်သဝန်တိုလွန်းတာဟာ မာန ကိုထိပါးလာတက်ပါတယ်။ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာကို စော်ကားသလိုဖြစ်လာ တက်ပါတယ်။ဆိုးတာ နွဲ့တာအပြစ်မဟုတ်ပေမယ့် စွပ်စွဲတာဟာ မယုံကြည်ခြင်းသက်သေပါပဲ။ […]
တုန်နေအောင် ချစ်တတ်တဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်ဆီမှာရှိတဲ့ ဒီအပြုအမူ (၇) ချက်
တုန်နေအောင် ချစ်တတ်တဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်ဆီမှာရှိတဲ့ ဒီအပြုအမူ (၇) ချက် ဟန်ဆောင်မှုတွေများလွန်းတဲ့ ဒီကမ္ဘာကြီးမှာ သင့်ချစ်သူ၊ လက်တွဲဖော်က သင့်ကို တကယ်မေတ္တာရှိမရှိဆိုတာကလည်း သိနိုင်ဖို့ ခက်ခဲတဲ့အရာတစ်ခုပါ။ ဒါပေမယ့် အဖြစ်မှန်အခြေအနေကို သိနိုင်တဲ့ သဲလွန်စတချို့တော့ရှိပါတယ်။ ၁။ သင့်မျက်လုံးကို ငေးစိုက်ကြည့်နေခြင်း ။ သူတို့ကောင်မလေးတွေကို တကယ်ဂရုစိုက်တဲ့ ကောင်လေးတွေဟာ မျက်လုံးကို အမြဲစူးစိုက်ကြည့်နေတတ်ပါတယ်။ ဒါဟာ သင်ဘယ်လို စိတ်ခံစားမှုမျိုးဖြစ်နေလဲ သိချင်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ မျက်လုံးဆိုတာ လူ့အတွင်းစိတ်ကို လှမ်းမျှော်ကြည့်နိုင်တဲ့ ပြတင်းပေါက်ဖြစ်ပါတယ်။ ၂။ ခွင့်လွှတ်ဖို့ ဝန်မလေးခြင်း ။ ကောင်မလေးကို တကယ်ချစ်တဲ့ ယောက်ျားလေးတွေ ကြာကြာ စိတ်မဆိုး တတ်ကြပါဘူး။ ကောင်မလေးအပေါ် စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်တဲ့အခါ ဒါ သူတို့အတွက် ဝန်ထုပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ ခွင့်လွှတ်ပေးလိုက်ခြင်းက စိတ်သက်သာရာရမှု တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ […]
ချစ်သူကို တကယ်ချစ်မိသွားတဲ့အခါ အမှန်တကယ်ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် ခံစားချက်(၉)ချက်
ချစ်သူကို တကယ်ချစ်မိသွားတဲ့အခါ အမှန်တကယ်ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် ခံစားချက်(၉)ချက် ၁။ သူအနားမှာရှိနေရရင် ဘဝတစ်ခုလုံးပြည့်စုံနေသလို အရမ်းပျော်နေမိတယ်။၂။ သူနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ အသေးအမွှားလေးတွေကအစ သေချာဂရုစိုက်ပေးနေမိတယ်။၃။ သူနဲ့အဆက်အသွယ်မရတဲ့အခါ အရမ်းစိတ်ပူမယ်၊ သူဘာတွေ လျှောက်လုပ်နေတာလဲ ဘယ်သူနဲ့ရှိနေလဲပေါ့။ ၄။ သူနဲ့စိတ်ဆိုး စိတ်ကောက်ကြတိုင်း တစ်လောကလုံးက ကိုယ့်ကို ဥပေက္ခာပြုထားသလိုမျိုး ခံစားနေရတတ်တယ်။၅။ ကိုယ့်ချစ်သူမှားမှားမှန်မှန် သူ့ဘက်က အမြဲရပ်တည်ပေးနေတတ်တယ်။၆။ အဆင်မပြေတဲ့ အချိန်တိုင်းလဲ ပြန်အဆင်ပြေသွားမယ်ဆိုတာ သိပေမဲ့ ပိာုတွေး ဒီတွေးနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကို နာကျင်ခံစားနေတတ်ကြတယ်။ ၇။ သူရဲ့စိတ်ဓာတ်ကျမှုတွေကို ခွန်းအားအဖြစ်ပြောင်းလဲအောင် ကိုယ့်က ဖေးဖကူညီပေးနေမိတယ်။၈။ သူများအတွက် သူက ဘာမှမပာုတ်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်နေပါစေ ကိုယ့်အတွက်ကတော့ ဘဝမှာ အရေးပါဆုံးသော လူတစ်ယောက်အဖြစ် လက်ခံထားကြတယ်။၉။ သူ့အပေါ်မှာ အတတ်နိုင်ဆုံး နားလည်ပေးပြီး သာယာတဲ့အချစ်တစ်ခုဖြစ်အောင် အမြဲကြိုးစားနေတတ်ကြတယ်။ Unicode ခဈြသူကို တကယျခဈြမိသှားတဲ့အခါ အမှနျတကယျဖွဈပျေါလာမယျ့ […]
အမျိုးသမီးတွေကို ဆွဲဆောင်ရာမှာ ရုပ်ရည်ထက် ပိုပြီးအရေးကြီးတဲ့ အချက် (၃)ချက် ရုပ်ရည်က အရေးကြီးသလားလို့ ချစ်သူရှာချင်တဲ့အမျိုးသားတွေက မေးလေ့ရှိပါတယ်။ တစ်ခွန်းတည်းပြောရရင်တော့ အရေးမကြီးပါဘူး။သိပ်လှတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်က သူ့ထက်အရပ်ပုတဲ့ အမျိုးသားတစ်ယောက်နဲ့တွဲသွားတာကို စာဖတ်သူ ဘယ်နှကြိမ်လောက် မြင်ဖူးသလဲ။ တွေ့လေ့တွေ့ထရှိတဲ့ မြင်ကွင်းမျိုးမဟုတ်ဘူးလား။သည်လိုပြောလို့ ရုပ်ရည်ရူပကာက လုံးဝအရေးမကြီးဘူးလို့ မဆိုလိုပါဘူး။ရုပ်ရည်ချောမောလို့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုကို နည်းနည်းလောက် တိုးမြှင့်ပေးနိုင်တယ်။ သည်လောက်ပါပဲ။ ရုပ်မချောလို့ မိန်းကလေးတွေစိတ်မဝင်စားဘူးလို့ မထင်လိုက်ပါနဲ့။ ရုပ်ရည်ဟာ အမျိုးသမီးတွေကိုဆွဲဆောင်ဖို့ အဓိကမကျရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့….. ၁. အမျိုးသမီးတွေဟာ အဆင့်အတန်းတွေကို ပိုစိတ်ဝင်စားတယ် အဆင့်အတန်းဆိုလို့ အပျံစားကားကြီး စီးနိုင်တာ၊ နာမည်ကြီးတာတွေကို ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ အဆင့်အတန်းဆိုတာ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းမှာ အဆင့်အတန်းမြင့်မှုကို ဆိုလိုတာပါ။လူမှုရေးအဆင့်မြင့်တဲ့အမျိုးသားတွေကို အမျိုးသမီးတွေက အလိုလိုစိတ်ဝင်စားကြပါတယ်။ လူမှုဆက်ဆံရေးအကောင်းဆုံး၊ စွမ်းဆောင်ရည်အရှိဆုံးသူတွေဟာ အမျိုးသမီးတွေ စိတ်အဝင်စားဆုံးသူတွေပါပဲ။ ၂. […]